Gudiga soo dhisa maamulka Koonfur Galbeed oo looga dhawaaqay Villa Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudiga soo dhisa maamulka Koonfur Galbeed oo looga dhawaaqay Villa Somalia
Guddi ka kooban 21 xubnoo, kuwaasoo soo dhisi doona qaab dhismeedka maamulka Koonfur Galbeed ee 3-da gobol ee Bakool, Baay iyo Shabeelaha Hoose ayaa xalay looga dhawaqay madaxtooyada Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, Xubno ka tirsan labada Gole ee dowladda, Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” qaar ka tirsan gudiga farsamo ee loo qorsheeyay in ay ka soo shaqeeyaan maamul u sameynta Saddexda Gobol iyo waxgarad iyo odayaal kasoo kasoo jeeda saddexdaas gobol.
Malaaq Ibraahim Macalin Cali oo ku hadlayay magaca bulshada ka soo jeedda Gobolada Maamulka Mideysan loo sameynayo oo madasha hadal ka jeediyay ayaa Madaxda dalka uga mahadceliyay dadaalka ay u galeen in xal laga gaaro kala aragti duwanaanshiyaha maamul u sameynta Gobollada Koonfur Galbeed, ayna soo dhaweynayaan gudiggan farsamo ee la magacaabay.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in gudiga la magacaabay ay ka dambeysay heshiiskii 23-kii June ee sanadkan ay kala saxiixdeen wakiilada kala matalayay maamulada is hayay, isagoo goobta ka akhriyay magacyada gudigga oo ka kooban 18 xubnood iyo saddex xubin oo xagga farsamada ka saacidi doono oo ay Xukuumadda Soomaaliya ku dartay, taasi oo wadarta guud ka dhigeysa 21 xubin.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa sheegay in arrintan ay gacan weyn ka geysteen odoyaasha dhaqanka, isagoo si gaar ah arrintaasi uga mahadceliyay Madaxweynaha iyo guddoomiyaha Baarlaamaaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in Ra’iisul wasaaraha iyo golahiisa wasiirada ay dadaal badan u galeen sidii ay arrintan u hirgeli lahayd.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay kawada shaqeynta dhismaha dowladnimada, waxaana uu kula dar daarmay bulshada Soomaaliyeed ee loo sameynayo maamulkaasi inay ku kalsoonaadaan guddiga farsamo ee la magacabaay oo dhinacyada kala duwan ka kooban.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladdu ay garabtaagantahay gudigga la magacaabay, isagoo kula dar daarmay inay ka shaqeeyaan sidii maamul lagu kalsoonyahay ay ugu sameyn lahaayeen dadka ka soo jeeda saddexda Gobol.
Gudigga farsamada ee Maamul u sameynta Gobollada Bakool, Baay iyo SHabeelaha Hoose ee la magacaabay ayaa qeyb ka ahaa heshiiskii kal hore ay wada galeen dadkii ku kala aragti duwanaa maamul u sameynta goboladaasi.
Maamulka Juba iyo Alshabaab ku dagaalamay Jubada Hoose